Masakhane, oru mmeghe nke na-enyere ntụgharị asụsụ igwe aka karịa 2000 asụsụ Africa | Site na Linux
Masakhane, oru mmeghe nke na-enyere ntụgharị asụsụ igwe aka karịa 2000 asụsụ Africa
Ọchịchịrị | | Ndị ọzọ
Mgbe anyị na-anụkarị gbasara ọrụ mmeghe emeghe ọtụtụ mgbe mmemme na-abata n'uche ma ọ bụ ihe eji arụ ọrụ maka ebumnuche ọrụ kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ikpe dị ka ndị dị otú ahụ, ebe ọ bụ na mepere emepe na-ekpuchi ọtụtụ ebe.
Otu n'ime ha bụ ọgụgụ isi nke na-eto ugbu a n'ụzọ dị oke egwu, n'agbanyeghị na afọ ole na ole gara aga ekwere na ọ ga-abụ ihe ga-etolite ọtụtụ afọ mgbe nke a gasịrị.
A na-eji ọgụgụ isi (AI) eme ihe maka ikpe dị iche iche, nke ihe kachasị ewu ewu bụ maka nchọpụta nke ihe, ndị mmadụ, usoro ihe ndị ọzọ. A na-ejikwa ya n’ime ndị ntụgharị, nke ọtụtụ ụlọ ọrụ nwegasịrị ikike na ya.
Ma na nke a anyi ga ekwu okwu banyere oru mmeghe nke kpaliri mmasị nke ọtụtụ kemgbe ahụ mepụtara iji gboo mkpa dị ukwuu n'ókèala Africa, nke bụ nkwukọrịta ebe ọ bụ na e mere atụmatụ ya ugbu a n'Africa enwere ihe dị ka asụsụ 2000.
Masakhane oru ngo agha aghaghi imezu maka odi nma
Ihe oru ngo a anyi ga ekwu maka ya bu "Masakhane" nke bu oru ngo nke ndi nchoputa South Africa IA guzobere Jade Abbott na Laura Martinus na oru ngo a na ndi oru nyocha nke ndi AI na ndi sayensi data sitere na Africa nile.
Mgbe ha zutere na ọgbakọ nwere metụtara ịmụ igwe na nhazi asụsụ (NLP) n’afọ a, ha tụlere ọrụ ịtụgharị asụsụ Afrika dị ka ụdị imụta igwe wee bido Masakhane. Aha oru ngo a "Masakhane" bu okwu putara "imere onu" na Zulu.
Asụsụ na-enye ohere ntụgharị asụsụ igwe na Masakhane gụnyere ọ bụghị naanị asụsụ ala nna Ndị Africa, mana bukwa olumba nke Nigeria Pidgin na Bekee na Arabic a na-asụ na North na Central Africa. N'adịghị ka asụsụ ndị Europe, asụsụ ndị a enweghị isi okwu ama ama ma ọ bụ usoro data buru ibu.
Na mgbakwunye na mkpa nke otutu ohere nye ndị Africa, uru nke ndị mmepe na-esonye na Masakhane ka edepụtara dị ka "Ọganiihu nke ọrụ ndị Afrika bụ AI bụ onye nyocha AI." O nwere ike iduga na mgbochi iru ala.
Ugbu a Masakhane nwere ihe dị ka ndị mmepe iri isii n ’Africa (South Africa, Kenya na Nigeria) nke onye ọ bụla sonyere na-anakọta data n'asụsụ ha ma zụọ ihe nlere ahụ.
Na Kenya, a na-ejikarị Bekee eme ụlọ akwụkwọ na ebe ọha na eze, ma na ndụ kwa ụbọchị, a na-eji asụsụ dị iche iche eme ihe maka ebo ọ bụla, ya mere Siminyu chere na enwere nkwukọrịta. Ndi. Ya mere, onye nrụpụta AI bụ Siminyu kpebiri isonye Masakhane.
Siminyu kwenyere na ntụgharị asụsụ asụsụ Africa site na iji mmụta igwe ga-eduga na uto ojiji nke AI na Africa, na-enyere ndị nọ n'Africa aka iji AI na ndụ ha. Siminyu na-arụ ụka na ọrụ gafee kọntinent ahụ, dịka Masakhane, ha dị mkpa maka ijikọ ndị mmepe Africa na obodo nyocha maka mmekọrịta ogologo oge na nkwado.
“Esemokwu asụsụ bụ ihe mgbochi, na iwepụ ihe mgbochi asụsụ ga-enye ọtụtụ ndị Africa ohere isonye na akụ na ụba dijitalụ, n’ikpeazụkwa akụ na ụba AI. Siminyu kwuru, "Echere m na ọ bụ ọrụ dịịrị ndị na-esonye Masakhane ime ka ndị na-anaghị etinye aka na obodo AI."
Ndị na-enyere aka nke Masakhane kwuo na ndị mmepe obodo nọ n'Africa na-agbasa n'ike n'ike na kwa uru dị na ntụgharị igwe maka asụsụ ndị Africa.
Anyị nwere ike idozi nsogbu ahụ. Anyị nwere ndị ọkachamara, anyị nwere ihe ọmụma na ọgụgụ isi… Echere m na ha ga-abụ ihe mgbakwasị ụkwụ iji nye aka na ụwa. Otu onye nrụpụta n'Africa na-ekwu.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere oru ngo, can nwere ike ịlele nkọwa na ya ukara website. Njikọ bụ nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Masakhane, oru mmeghe nke na-enyere ntụgharị asụsụ igwe aka karịa 2000 asụsụ Africa
Ndị a bụ atụmatụ nke Ubuntu 20.04 maka nchịkọta 32-bit
Bubblewrap, akụrụngwa maka imepụta ngwa na gburugburu dịpụrụ adịpụ